Ọrụ Omume Robotics - Kimroy Bailey Group
Rasta Robot Mee ihe omume ọzọ ị ga - echezọ Hụ ngwugwu ihe a
Ọrụ Omume RoboticsKimroy Bailey2018-07-11T13:56:24-05:00
Cocktail Onye ọ bụla?
Nye ndị ọbịa gị ahụmịhe nke ha agaghị echezọ site na Ọrụ Kọnịlị KB Group Robotics. Oge ha ga-a miniụ obere mmanya si Rasta Robot. A ga-ekele gị na Jamaican Accent na-ekpo ọkụ na robot ahụ nwere ike ịza otu ajụjụ ma ọ bụ abụọ.
Omume Robot Mimic Guest
Ihe ngwugwu 5 Rasta Robot
Chicken Onye ọ bụla?
Igwefoto ga na-egbu maramara na eserese na bulite na Social Media na nkeji. Ndị ọbịa ga-ekwu maka ihe omume a maka afọ ndị na-abịa. N’oge ahụ mgbe otu Robotic Arm na-efe nku ha. Na-ekwu maka Futuristic!
Tinye Drumstick na efere m, biko
Nye High Five 🙂
Ihe ngwugwu Bailey
Ju gi ọbịa
Nnukwu mma maka isi okwu ọdịnihu. Ndị ọrụ ihe omume Kimroy Bailey Group Robotics ga-eweta iko laser nke na-enwu enwu, na-eme ka elu ịgba egwu ma n’ezie nye ndị ọbịa gị ihe ga-eme n’ọdịnihu.
Ihe ngwugwu laser iko
Ngosipụta Drone Lightge
Ọ dị mma maka ntọala obere ọkụ dịka nke ambiance VIP. Ndị ọbịa nwere ike lelee anya ma kirie ka robots ndị a na-efe efe na-eji ngosipụta ọkụ na-acha nwere agba dị iche iche.
Ihe nchịkọta nke Drone Lighting
Ezigbo Robot Zuru Ezu
Were ngwugwu gị banye na 2030 na ngwugwu Robot Suit zuru ezu. Kedu maka ejiji dị mma, na-eje ije, na-agagharị agagharị. Onye otu anyị ga-ewuli ndị na-ege gị ntị elu ma hụ na ekwurịtara okwu gị nke ọma.
Ihe ngwugwu Robot
Drone Choreographed ịgba egwu
Na-emekọ ihe n’ọdịnihu
Nke a bụ ihe ngosi na-agba egwu na-eji drones. Demonstzọ ngosi dị mma maka ndị ọbịa ịmekọrịta na teknụzụ nke ọdịnihu.
Ihe ngwugwu egwu Drone